01 गुल्मीमा जिप दुर्घटनामा पाँच जनाको मत्यु
02 नेकपा विवादः टुट्यो ओली र दाहालबीचको संवाद
03 १२ दिनसम्म देखाइने कार्तिक नाच दुई दिनमा सीमित
04 दुई देशबीचको समस्या समाधान गर्न भारत सकारात्मक
05 नेप्सेमा नयाँ ब्रेकः सातामा ३१ अर्बको कारोबार
06 उपभोक्ताका घरघरमा खानेपानीको धारा
07 ‘स्मार्ट’ बन्दै विद्युत् प्राधिकरण
08 उच्चस्तरीय टोली महाकाली सिँचाइ आयोजनाको अनुगमनमा
09 स्ट्रोकको खतरा घटाउने दुग्ध पदार्थ खानुस्
desk	९ कार्तिक २०७७, आईतवार
काठमाडौं,भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको एक दिने नेपाल बसाईको भ्रमणले यतिवेला नेपाली राजनीतिक तरंगित बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेर फर्किएका भनिएका रअ प्रमुखले ओलीबाहेक अन्य ६ जना शीर्ष नेताहरुलाई पनि भेटेको खुलासा भएको छ ।
त्यसको अलावा कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल र सशांक कोइरालाले पनि गोयलसँग भेटेका थिए । उता, जनता समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भेटे गरेको बताईएको छ । यी ६ जना नेताहरुले रअ प्रमुखसँग भेटेर पनि किन भेट भएको छैन् ? भनेर कुरा लुकाए ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यी नेताहरुसँग कतिपय गोयल बसेको होटलमा पुगेका थिए भने कतिपय नेतालाई भेट्न गोयल आँफै उनीहरुको निवास पुगेका थिए ।
गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको शिष्टाचार भेटवार्तालाई लिएर नेकपाभित्रै आलोचना भैरहेको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम बहादुर रावलले समेत सार्वजनिक रुपमै उक्त भेटवार्ताको बारेमा आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भने उक्त भेटवार्ता शिष्टाचार भेटवार्ता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो भेटवार्ता माग्दा दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेत रहेको दाबी गरेको छ ।
‘पहिला/पहिला नेपाली नेता लाईन लागेर ईण्डियामा धाउँथे, यसपटक भारतका रअ प्रमुखदेखि सेनाअध्यक्ष नेपाल आउँदैछन्’ : श्रेष्ठ